Ch 17 John – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaJohani / Ch 17 John
17:1 Jesu akati zvinhu izvi, ndokuzo, vachisimudza meso ake kudenga, akati: "Baba, nguva yasvika: kudzai Mwanakomana wenyu, kuti Mwanakomana wenyu akukudzei,
17:2 sezvo zvamakamupa simba pamusoro penyama yose kwaari, saka kuti ape upenyu husingaperi kuna vose vamakamupa apiwa.
17:3 Uye izvi husingaperi: kuti vazive imi, Mwari wechokwadi chete, uye Jesu Kristu, wamakatuma.
17:4 Ndakakukudzai panyika. Ini wapedza basa ramakandipa kuti ndiite.
17:5 Zvino Baba, ndikudzei mukati pachako, nokukudzwa kwandaiva nako ndinemi nyika isati nokusingaperi yakanga.
17:6 Ndaratidza zita renyu kuvanhu vamakandipa kwandiri kubva nyika. Vakanga vari venyu, mukavapa kwandiri. Uye vakachengeta shoko renyu.
17:7 Zvino vanoziva kuti zvinhu zvose zvamakandipa zvinobva kwamuri.
17:8 Nokuti ndakavapa mashoko amakandipa kwandiri. Uye ivo vakagamuchira mashoko aya, uye ivo zvechokwadi vanzwisisa kuti ini akabuda iwe, uye vakatenda kuti imwi makandituma.
17:9 Ndinovanyengeterera. Handisi kunyengeterera nyika, asi kune avo vamakandipa kwandiri. Nokuti ndevenyu.
17:10 Uye zvose zvangu ndezvako, uye zvose ndezvangu, uye ndine mbiri mune izvi.
17:11 Uye kunyange ndisiri munyika, ava vari munyika, uye ini ndiri kuuya kwamuri. Baba tsvene, ndichengetedzei muzita renyu, avo vamakandipa kwandiri, kuitira kuti vave mumwe, kunyange sezvo tiri umwe.
17:12 Pandaiva navo, I akaachengetedzawo muzita renyu. Ndikachengetedza avo vamakandipa kwandiri, uye hapana mumwe wavo wakarasika, kunze mwanakomana wokurashika, saka kuti Rugwaro ruzadziswe.
17:13 Zvino ini ndiri kuuya kwamuri. Asi ndiri kutaura zvinhu izvi munyika, kuitira kuti vave kuzara nomufaro wangu mukati mavo.
17:14 Ini ndakavapa shoko renyu, uye nyika ikavavenga. Nokuti havasi venyika, sezvandakaita, wo, handizi wenyika.
17:15 Handisi kunyengeterera kuti muvabvise munyika, asi kuti iwe kuti achengetedze navo kubva zvakaipa.
17:16 Havasi venyika, sezvandinoita neniwo ndisiri wenyika.
17:17 Vaitei vatsvene muchokwadi. Shoko renyu ichokwadi.
17:18 Sezvamakandituma ini makandidzinga munyika, Neniwo ndavatuma panyika.
17:19 Uye kwavari kuti ini ndinozviita mutsvene, kuti, wo, vaitwe vatsvene muchokwadi.
17:20 Asi handisi vachivanamatira chete, asi naivo kuburikidza neshoko ravo vatende mandiri.
17:21 Saka dai vose vave umwe. Sezvo iwe, Baba, muri mandiri, uye ini ndiri mamuri, saka muvepowo ivo vave umwe matiri: kuti nyika igotenda kuti makandituma.
17:22 Uye kukudzwa kwamakandipa kwandiri, Ini ndakavapa, kuitira kuti vave mumwe, sezvo isuwo tiri umwe.
17:23 Ini ndiri mavari, uye imi muri mandiri. Saka dai vakwaniswe somunhu. Uye dai nyika vanoziva kuti makandituma uye kuti makavada, sezvo imi vo makandida.
17:24 Baba, Ndichakupa kuti apo ini ndiri, avo vamakandipa kwandiri Kungavawo neni, kuitira kuti vaone kukudzwa kwangu kwamakandipa makandipa. Nokuti imi makandida nyika isati yavambwa.
17:25 Baba chete, nyika haina kukuzivai. Asi ini ndakakuzivai. Uye ivo vanoziva kuti makandituma.
17:26 Uye ndakazivisa zita renyu kwavari, uye ndichaiita kuvazivisa, kuti rudo rwamakandida makandida ruve mavari, uye kuti ndirege kuva navo. "